Ugbu a bụ oge maka ndị nrụpụta iji soro ndị na-eme iwu rụọ ọrụ iji wuo ọdịnihu
enwere ọtụtụ mkparịta ụka n’oge na-adịbeghị anya maka otu ndị nrụpụta ga-esi jiri ọgba aghara taa dị ka ohere iji tụgharịa maka echi. Ma ọ bụ eziokwu. Ma ọ na-ewulite ume na ike nke ngwa ọrụ ha, na-ewusi ndị ọrụ ha ike, ma ọ bụ ịmaliteghachi akụrụngwa teknụzụ ha, ọrịa a emeela ka ọtụtụ ụlọ ọrụ gbanwee ụzọ iji nwee ọganiihu n'ọdịnihu.
N'agbanyeghị nke ahụ, COVID-19 atụnyewokwa nsogbu ọzọ na-aga n'ihu na ntụpọ. Dika mba, obodo na ulo oru ndi oru kwusi, ihe oma di na mbara uwa bu ihe oma. Ntuzi nke NASA si Earth Observatory gosipụtara na n’agbata ọnwa Febụwarị na Nọvemba nke afọ gara agaoge, enwerela.
N'agbanyeghị nsogbu ahụike na akụ na ụba nke coronavirus ugbu a, enweghị ike ileghara elele gburugburu ebe a anya - ha ekwesịghịkwa ileghara ya anya. Dịka ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ihe na-achọ kwalite mgbake nke ha na nke United States n'ozuzu
, ha ga-ejikwa ohere ahụ rụọ ọrụ ha n'inwe ọdịnihu ga-adigide.
A Joint Mgbalị
Ihe ozi ọma bụ na ihe mgbaru ọsọ abụọ a enweghị nkwekọrịta. Ndị ahịa na ndị ọrụ na-ahụ otu dị ka ndị bụ isi na-akpata mgbanwe mmekọrịta na gburugburu ebe obibi, ịbụ ezigbo azụmaahịa na-apụtawanye ịme azụmaahịa ọma.
Ihe na-agba ume bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe agafeela nke ọma, mana ha anaghị anata otuto ha kwesịrị. ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ike iji meziwanye usoroNdụ ngwaahịa, akụkụ buru ibu nke ụlọ ọrụ ahụ na-etinye ego dị ukwuu n'ibelata akara ụkwụ gburugburu ebe obibi.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme. Mana ka nke ahụ mee, ndị nrụpụta ga-arụkọ ọrụ ọnụ na usoro ihe omumu ha niile yana gọọmentị. Dị ka ọ kọwara, ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ "mkpụrụ osisi dị mma" maka igbochi mgbanwe ihu igwe ugbu a ahọrọla. Inweta ya n'ọkwa Mbelata nsị ga-abụrịrị ihe jikọrọ ọnụ.
Threezọ atọ na Ọdịnihu Greener
Karịsịa, enwere ohere atọ iji nyere ụlọ ọrụ aka ịgbanwe nrụgide a na-amanye nke COVID-19 ka ọ bụrụ onye nduzi atụmatụ maka ọdịnihu ga-akawanye njọ.
1. Ime ka ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mfe
Ugbu a, ọ dị ka enwere nkwenye sara mbara na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihu igwe dị mgbagwoju anya. Ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ na-agbalị nagafee usoro ọgba aghara nke gọọmentị etiti, nke steeti na ọbụlagodi nke ime obodo na ebumnuche. Enwere ike ịme ihe a ka ọ dị mfe, na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị nrụpụta ịghọta isi okwu kachasị mkpa chọrọ nlebara anya - wee mejuputa atumatu mgbanwe kwesịrị ekwesị.
2. Nyere aka belata mmefu
Maka ndị nrụpụta, ọtụtụ n'ime ha na-eji otu usoro ihe nketa kemgbe ọtụtụ iri afọ, ịkwaga ụdị azụmaahịa na-adigide ga-ewe ọtụtụ oge, ego na akụrụngwa. Ntinye ego a dị mkpa; ka emechara, ịme ihe iji belata akara ụkwụ gburugburu ebe obibi ha bụ naanị ihe kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụrụ n'ụdị mkpalite ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze, enwere ike ime ka ọganihu dị ngwa site na ịbelata ma ọ bụ ịwepụ ụfọdụ nsogbu akụ na ụba na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-anwa ịme mmetụta.
3. Ebuputarachụghachite usoro okike
Iji mee ka mgbanwe gbanwee n'ọtụtụ, ndị nrụpụta ga-esoro ndị na-eme iwu tụlee usoro okike dị ukwuu nke ndị nrụpụta bụ akụkụ. Site n'ọtụtụ ọkwa nke ndị na-ebubata ngwaahịa na ụlọ ọrụ na-ebugharị ngwaahịa ndị na-ekesa ngwaahịa ndị ahụ na ndị ọrụ njedebe nke mechara kpebie ma a ga-emegharị ngwongwo ahụ, ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọzọ, atumatu, ihe mkpali na ọbụna usoro ntaramahụhụ ga-agbakọ iji nyere onye ọ bụla aka. jiri otu uzo ahụ mee ihe.
A Nnukwu ọhụụ
Nke a abụghị ma ọlị oku na-akpọ ndị nrụpụta ka ha zuo ike ma hapụ ndị na-eme mkpebi ka ha rụọrọ ha ọrụ. Nkwekorita nke ulo oru iji belata onodu ha na ndi mmadu aghaghi aghagha ma kwado ya.
Dị ka ndị na-eme mkpebi, ọ dị ha mkpa ilepụtakwu echiche ha ma chee echiche otu aga - esi nwee mmụba gafee ngalaba ahụ.gbagoo uru bara uru karịa n'elu ụlọ ahịa ha - site na imewe maka ọrụ ndị ahịa. Ndị isi ndị isi ga-ekwusi okwu ike banyere ọrụ nke imepụta ihe na-eme ka mgbake na-acha akwụkwọ ndụ.
laghachi na ọdịnihu
na obere oge, oria ojoo a enyela ihe ncheta siri ike banyere mmetụta gburugburu ebe obibi nke ndụ mmadụ ma na-egosipụta ọrụ nke obodo, azụmahịa na gọọmentị n'ichebe ọdịnihu nke ụwa. Dịka ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka ihe dị ka 22% nke ikuku gas na United States na 2018, nrụpụta nwere ọrụ dị oke mkpa ma buru ibu. Mana azụmahịa ọ bụla chọrọ mmesi obi ike na mgbanwe dị mkpa ga-ekwe omume chọrọ naanị n'oge gara aga. Ihe karịrị afọ 200 gara aga, imepụta ihe bụ isi nke mgbanwe mgbanwe ụlọ ọrụ nke megharịrị akụ na ụba US wee gbanwee anyịndụ ebighi ebi. Ọganihu ngwa ngwa ruo taa ma jiri mkpebi ziri ezi, itinye ego na nkwado, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịbụ ihe mmegharị ọzọ maka mgbanwe. Naanị n'oge a ka ọ ga-emeghe ụzọ maka ọha mmadụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Echiche ndị ode akwụkwọ kwupụtara abughi nke Ernst & Young LLP ma ọ bụ ndị ọzọ so na nzukọ EY zuru ụwa ọnụ.